के N95 फेस मास्कले कुकुरो भाइरसलाई समात्नबाट कुकुरलाई बचाउन सक्छ? - राम्रो एयर टीम द्वारा K9 मास्क
घर > वायु प्रदूषण कुकुर ब्लग > के N95 फेस मास्कले कुकुरो भाइरसलाई समात्नबाट कुकुरलाई बचाउन सक्छ?
के N95 फेस मास्कले कुकुरो भाइरसलाई समात्नबाट कुकुरलाई बचाउन सक्छ?
के एयर फिल्टर मास्कहरूले व्यक्ति र घरपालुवा जनावरहरूलाई कोरोनाभाइरस समात्न रोक्छ? अनुहार मास्कहरू कथित रूपमा एशियाभरका शहरहरूमा बेचिरहेका छन् चिन्ताहरू माथि रूपमा एक घातक नयाँ कोरोनाभाइरस को फैलाव बढ्न।
चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले यस प्रकोपलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य सेवाकर्मीहरुलाई मास्क लगाएको छ र रिपोर्टका अनुसार लाखौं मास्क वुहानका बासिन्दालाई पठाइएको छ।
हामीलाई थाहा छ कोरोनाभाइरस हावामा उड्ने, र त्यो हो यो मान्छे बीच प्रसारित गर्न सकिन्छ। तर कुकुरलाई के हुन्छ? अन्वेषकहरू विश्वास गर्दछन् कि भाइरसले जनावरहरूबाट मानिसहरूमा हाम फालेको हुन सक्छ समुद्री खाना बजारमा वायुजनित कणहरूको साँसको माध्यमबाट जुन प्रत्यक्ष जंगली जनावरहरू बेच्दछ। त्यसोभए, यसले तपाईंको नाक र मुख ढाक्न अर्थ दिन्छ।
कोरोनाभाइरसको वर्तमान संस्करण के हो?
यद्यपि मानिसहरूले प्रायः "कोरोनाभाइरस" मा वर्तमान रोगलाई संकेत गरिरहेछन्, यो शब्द वास्तवमा भाइरसको परिवारमा लागू हुन्छ जुन एक "मुकुट" जस्तो देखिन्छ, जब एक इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप अन्तर्गत हेर्दा, भनिन्छ। कोरोनाविरिडे। हालको तनाव, जुन पहिलो डिसेम्बरमा देखीएको थियो, यसलाई 2019-CoV भनिन्छ। तपाईंले सुन्नु भएको अन्य तानाहरूमा SARS-CoV र MERS-CoV समावेश छन्। दुबै दुबै समान उथलपुथलको कारण हो, तर पछि सेटल भयो।
२०१--CoV वुहान, चीन, मा एक गीला बजार मा उत्पत्ति भएको छ भन्ने सोचाइ छ सर्पको खपत मार्फत त्यो भाइरस संक्रमित थियो। आज को रूपमा, त्यहाँ छन् चीनमा २,2,500०० जना पुष्टि भएका छन् तर संयुक्त राज्य अमेरिकामा including सहित अन्य मुलुकमा infected 56 जना मात्र संक्रमित भएका छन्। ती सबै हालसालै चीनको वुहान गएका छन्।
के पशुहरू कोरोनाभाइरस लिन सक्छन्?
हो। हालको तनाव वास्तवमा बजारमा बेचेको सर्पसँग जोडिएको छ। यस अवस्थामा, यस्तो देखिन्छ कि भाइरस बोकेका जनावरहरूले यसको मासुको उपभोग मार्फत यसलाई मानव होस्टमा पुर्‍याउन सक्षम भएका थिए। (यो अझै पनि रोग नियन्त्रण केन्द्र द्वारा अनुसन्धान भइरहेको छ।)
के मेरो कुकुर कोरोनाभाइरस पाउन सक्छ?
त्यहाँ क्यानाइन कोरोनाभाइरस रोग छ - तथापि, यो यस तनावसँग जोडिएको देखिदैन।
क्यानाइन कोरोनाभाइरसको नाम उही विशेषताबाट प्राप्त हुन्छ जुन मानव भाइरसहरूले लिन्छन् - एक गोलो, मुकुट जस्तो देखिन्छ जब एक इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप मुनि हेर्नुहोस्। धेरै जसो कुकुरहरूले कुकुरहरू खाएर भाइरस बोक्दछन्। उसले फेला पार्न सक्ने कुनै पनि पाइल्सबाट उसको मुख टाढा राख्नुपर्ने अर्को कारण।
VCA अस्पताल अनुसार, क्यानाइन कोरोनाभाइरस रोगले मानिसलाई असर गर्दैन।
कुकुरहरूमा कोरोनाभाइरसका लक्षणहरू के-के हुन्?
कोरोनाभाइरस प्राय जसो कुकुरमा लक्षण पैदा गर्दैन, तर केहि अवसरहरुमा, तपाईले एकाएक पखाला, अचानक सुस्तता र कमजोर भोकको साथ लक्षण देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको कुकुरको पखालामा रगत वा बलगम हुन सक्छ, र यदि संक्रमण भएको छ जब तपाईंको कुकुरले अर्को रोगबाट ग्रस्त छ, जस्तै पार्भोभाइरस, यसले यसलाई अधिक गम्भीर बनाउँदछ।
अवश्य पनि, यी लक्षणहरूले अन्य धेरै मुद्दाहरूको स .्केत गर्न सक्दछ, त्यसैले तपाइँको पशु चिकित्सक हेर्न निश्चित हुनुहोस्।
के म मेरो कुकुरबाट कोरोनाभाइरस लिन सक्छु?
यस बिन्दुमा, कुकुरहरूमा सन् २०१ 2019-CoV को कुनै रिपोर्ट गरिएको छैन।
कोरोनाभाइरसको पछिल्ला स्ट्रिनहरू पछाडि ट्रेस गरिएको थियो मानवीय सम्पर्क गर्न को लागी। SARS-CoV सिभेट बिरालाहरू, र ड्रमड्री उँटहरूबाट MERS को सम्पर्क मार्फत भएको हो जस्तो देखिन्छ। २०१--CoV पहिलो भएको मानिन्छ सर्पको माध्यमबाट मानिसलाई हस्तान्तरण त्यो वुहानको बजारमा बेचिन्थ्यो। मानव होस्टलाई सing्क्रमित गरिसकेपछि भाइरसले श्वासप्रश्वासको समस्या उत्पन्न गर्दछ र मानव-मानवबाट प्रायः हावाबाट छिर्केर सर्छ वा छिन्कीमा सर्दछ।
के म मेरो कुकुर कोरोनाभाईस दिन सक्छु?
यदि तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ कि तपाईं संक्रमित हुन सक्नुहुन्छ, तपाईंले तुरुन्तै आफ्नो डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुपर्दछ, र तिनीहरूलाई थाहा दिनुहोस् तपाईंलाई शंका लाग्छ कि तपाईंलाई संक्रमित हुन सक्छ उनीहरूलाई भेट्नु अघि उनीहरू सावधानी अपनाउन सक्छन्। कोरोनाभाइरसको विस्तार रोक्नको लागि यहाँ हेर्नुहोस् CDC.gov.
कोरोनाभाइरसका पहिलेका स्ट्रिनहरूले देखाउँछन् कि स्तनपायी जन्तुहरू, जस्तै ऊँट र सिभेट बिरालोहरूले क्यारोनाभाइरस पाउँछन् र मानिसहरूलाई संक्रमित गर्छन्। तथापि, त्यहाँ कुनै पनि केसमा देखा पर्दैन कोरोनाभाइरस बोकेका मानिसहरूले तिनीहरूको घरपालुवा जनावरहरूलाई स .्क्रमित गरिरहेछन्।
राम्रो स्वच्छता अभ्यासहरू सँधै तपाईंको पहिलो सुरक्षा हुनुपर्छ - नियमित रूपमा आफ्ना हातहरू धुनुहोस्, तपाईं टाँस गर्दा तपाईंको मुख छोप्नुहोस्। तपाईको कुकुरका लागि - उसलाई पोप खानबाट रोक्न कोसिस गर्नुहोस्, ऊ पछि उसको पछि लाग्नुहोस् जब उसले आफ्नो व्यवसाय गर्दछ, र नियमित स्नान गर्दछ।
के मज्जा मास्कले मेरो कुकुरलाई कोरोनाभाइरसबाट जोगाउन सक्छ?
त्यहाँ दुई मुख्य प्रकारको फेस मास्कहरू छन् जुन व्यक्तिहरू प्रयोग गर्दैछन्। एउटा एक मानक शल्य चिकित्सा मास्क हो - जुन प्रकारको शल्य चिकित्साहरूले अपरेशनको बेला लगाउँदछन्। यी मास्कहरू तरल बूढीहरू रोक्नको लागि डिजाइन गरिएको हो, र अर्को व्यक्तिबाट भाइरस समात्ने सम्भावना कम गर्न सक्छ।
तर यी मास्कहरूले वायुजनित भाइरसहरू विरूद्ध पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्दैन। सुरूवातीको लागि, तिनीहरू नाक र मुखमा पूर्ण रूपमा छाप गर्दैनन् - कणहरू अझै भित्र पस्न सक्छन्। र धेरै साना कणहरू केवल मास्कको सामग्रीबाट पार गर्न सक्छन्। यी मास्कहरूले पनि पहिरनेका आँखा खुलासा गर्दछ - र सम्भव छ भाइरसले त्यस प्रकारले स inf्क्रमित गर्न सक्छ। "उनीहरूले मद्दत गर्न सक्छन्, तर यो स्पष्ट छैन कि तिनीहरूले तपाईलाई पूर्ण सुरक्षा दिन्छन्" मार्क वूलहाउस युनिभर्सिटी अफ एडिनबर्ग विश्वविद्यालयका भन्छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठन सिफारिश गर्दछ कि भाइरसका साथ उपचार गर्ने सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूले यी शल्यचिकित्साको मास्क लगाउनका साथै पन्जा, गग्गल र गाउन लगाउँदछन्। सर्जिकल मास्कहरूलाई क्लिनिकल सेटिंगमा बढी प्रभावकारी मानिन्छ किनकि तिनीहरूसँग अन्य सुरक्षा उपकरणहरू र कडा स्वच्छता अभ्यासहरू छन्। मास्क पनि बारम्बार बदलिएको छ - शल्य मास्कहरू एक भन्दा बढि प्रयोगका लागि डिजाइन गरिएको छैन।
दोस्रो प्रकार N95 एयर फिल्टर हो जसले अधिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ। त्यस्ता उपकरणहरू 95 percent प्रतिशत सानो कणहरूलाई नाक र मुखमा प्रवेश गर्नबाट रोक्नको लागि डिजाइन गरिएको हो। तर तिनीहरू मात्र काम गर्दछन् यदि तिनीहरू उचित रूपमा फिट हुन्छन्। K9 मास्का कुकुरको अनुहार वरिपरि मास्क कडा गर्न को लागी कुल्चिन मा एक velcro थूली समायोजन संग कुकुरहरु को लागी N95 मास्क हो।
जबकि एशियाली यात्रीहरूले आफ्नो नाक र मुख निलो हरियो कागज पातलो कभरले ढाकेका छन् - र सोशल मिडियामा मास्क इमोजीहरू छन्, भण्डार र अभावको अफवाह - नम्र मेडिकल मास्क अदृश्य दुश्मनको बिरूद्ध लडाईको लागि अत्यावश्यक हतियार भएको छ।
जबकि आधारभूत, छाडा फिटिंग मास्कले संक्रमित व्यक्तिहरूबाट खोकीको थोपा फैलाउन रोक्न मद्दत गर्दछ, तिनीहरू "एकतर्फी" सुरक्षा हुन् र खतरनाक वायुजनित सूक्ष्मजीवहरूमा सास फेर्न प्रभावकारी अवरोध सिर्जना गर्दैनन्। फ्रान्सका स्वास्थ्यमन्त्री एग्नेस बुजिनका अनुसार दूषित न भएका व्यक्तिहरूका लागि यो सिफारिस गरिएको बाधा उपायमध्ये एक होइन।
ओसाका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता सतोशी हिरोईले एएफपीलाई भने कि उच्च गुणस्तरको मास्क प्रभावकारी हुनसक्दछ, जसले महँगो र कडा फिटिंग रेसिपरेटर्सलाई धूल र प्रदूषणको उत्तम कण फिल्टर गर्न प्रयोग गर्दछ।
"तर जहिले जहिले पनि १०० प्रतिशत ग्यारेन्टी छैन," उनले भने, विज्ञान अझै ठ्याक्कै बाहिर रहेको थियो कि भाइरस कसरी स --्क्रमित छ - जसमा हालसम्म १० people व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ र ,100,००० भन्दा बढीमा संक्रमित छ - यो भाइरस कसरी संक्रमित हुन्छ।
अझै, बैंककको सडकमा धेरै जनताले मंगलबार शल्यचिकित्सक मास्कमा विश्वास राखेका थिए, जुन चिन्ताजनक समयमा आत्म-रक्षाको कार्य हो। "म भाइरसको बारेमा धेरै चिन्तित छु," तान्यामोन जामोफस्ट। "जता जता पनि जान्छु (एक मास्कको बाहेक) म आफ्नो हात सफा गर्न र चिनियाँ पर्यटकहरुका क्षेत्रहरु बाट बच्न म रक्सी र जेल सेनिटाइजर पनि ल्याउँछु।"
अरूले गह्रौं कर्तव्य लगाएका थिए - र अधिक प्रभावशाली - PM2.5 वा 3M (N95) मास्कहरू, शहरमा हप्ताहरूसम्म हानिकारक प्रदूषणबाट खस्कियो। चिनियाँ आगन्तुकहरुमा पत्ता लागेका एक बाहेक चौधौं संक्रमण थाईल्याण्डमा रिपोर्ट गरिएको छ, मुख्य भूमिबाट टुर समूहहरूको लागि शिखर मौसम गन्तव्य।
२००२/2002 मा सार्सको महामारी पछि उनले देखेका मेडिकल चीजहरूको सबैभन्दा गम्भिर आतंक खरीदको कारण बनेको रसायन विज्ञ सुफक सापकुलका लागि। "हाम्रा सबै (मास्क) आपूर्तिकर्ताहरू स्टक बाहिर छन्। यी मास्कहरू चीनमा बनेका छन र देश पनि आफैंमा स stock्ख्यामा छ, ”उनले भने।
"हामीलाई थाहा छ कि यसले १०० प्रतिशत सुरक्षा प्रदान गर्दैन तर यो कुनै कुरा भन्दा राम्रो हो ... (र) यसले जनतालाई पनि आश्वासन दिन सक्छ।" जोसँग छ उनीहरूको लागि पनि यसमा मास्किंगको लागि उचित विधि रहेको छ। सोमबार प्रस्फुटनको केन्द्रबिन्दु वुहानका मेयरले आफ्नो मास्क भित्र-बाहिर लगाइसके पछि अनलाइन ब्याटि took लिए।
"मास्क र अनुहारको बिचमा कुनै अन्तर भएमा तपाई भाइरसलाई भित्र सार्न सक्नुहुन्छ," ओसाका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानका सतोशी हिरोईले भने। यसैबीच हुबेई प्रान्तीय गभर्नरले पत्रकार सम्मेलनको बेला मास्क नलगाएकोमा टेलिभिजन गरिएको थियो।
नियमित रूपमा साबुनले हात धुनु, मदिराले घस्रनु र आफ्नो अनुहार छोड्नु नदिन र भीडभाड ठाउँहरूलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले संक्रमण बिरूद्ध प्रभावकारी व्यक्तिगत स्वच्छता बानीको रूपमा समर्थन गर्दछ।
कम्बोडियादेखि टोकियो र हुबेईदेखि ह Hongक Kong सम्मका कम्फोडियादेखि स्टकमा स्टक स्टिलिंग वा मूल्यवृद्धिमा कुनै सल्लाह रोकिएको छैन।